Waxaan eegnaa xiddigo, ee ma ahan kalluunka xiddigta. Ku saabsan sahminta badaha
Waxa daabacay	 Paweł Czechowski
Hal ku dhegyada hal ku dhigyada ah ee aan ka akhriyey xusuusta murugada internetka ayaa ah "Waa goor dambe in aad soo ogaato qaaradaha cusub, laakiin waa goor hore in aad ogaato meerayaasha cusub." Weedhan soo jiidashada leh waxaa loola jeedaa ganaax waqti uun taariikhda ka mid ah. Laakiin ka warran haddii xilligu ku habboon yahay sahamin kale - sahaminta badaha?
Dhulkeenu wuxuu la mid yahay guriga awoowayaashayo ay ku leeyihiin baadiyaha. Waad ku dul socon kartaa noloshaada oo dhan, waxaana had iyo jeer jiri doona meel dhuumasho ah oo aanan wax fikrad ah ka haysan. Waa maxay helitaanka waligiis hal meel ku yaalay, laakiin markii ugu horreysay ayaan aragnay.
Tani waa sida ay tahay dhulka - in kasta oo xilligii cilmi-baarisyo juqraafiyeed aad u weyn ay naga dambeyso, in kasta oo safarku u joogsaday koronto sidii hore ee xilliyadii Columbus, inkasta oo adduunka ay yaqaaniin reer Yurub uusan ku dhammaanayn tiirarka Hercules (ie Gibraltar) iyo xeebta Afrika) ... Had iyo jeer waad arki kartaa oo aad la kulmi kartaa wax badan.
Tani waa sababta sanad kasta joornaalada cilmiga ah ee halista ah ee cinwaankoodu aad u adag yahay ugu dhawaaqaan daraasiin jeer in nooc cusub oo xayawaan ah la helay - badiyaa yar oo aad u dhif ah, sida amphibian ama xitaa cayayaan ka yimaada kaymaha colaadeed. Mararka qaar warshad yar ayaa ka muuqata dusha sare ee cufan, ku dhowaad aan la geli karin, oo indhaha bani'aadamku aysan la kulmin kahor illaa iyo safarkan sahamiyaha-sahaminta.
Immisa kale oo aan la aqoon, rahyo qosol badan ayaa na sugaya? (sawir: cocoparisienne, Liisanka Pixabay)
Dhul duur ah, wali lama oga
Mararka qaarkood, si kastaba ha noqotee, waa wax iska soo horjeedda - warbaahinta ayaa wax ka qorta waxyaabo qarsoodi ah oo qarsoodi ah waxaana jira calaamado yar oo muujinaya in tani isbeddelayso. Waxay qorayaan in Amazon dhexdeeda ay jiraan geedo gebi ahaanba ah oo ilbaxnimo (hagaagsan, oo) nin uusan waligiis cag soo dhigin waana adag tahay in la ogaado waxa jira. Waxay sharraxayaan sida meel fog - iyo xitaa aragtida shimbirta, sababtoo ah dusha sare ee diyaaradda - waxaad ka arki kartaa Hindida ka soo jeeda qabiil aan xitaa qiyaasi karin nin dul sabeynaya daruuraha ilbiriqsi.
Waxay ku soo warrameen in jasiiraddan oo kale oo ku taal jasiiradda Andaman - Waqooyiga Sentinel - ay jireen dad gebi ahaanba go'doonsan kumanaan sano, kuwaas oo aynaan si dhab ah u garanaynin afkooda, iyo caadooyinkooda aynaan waligood si buuxda u garanayn - maxaa yeelay waa nala soo gaadhayaa fallaar ama waran Sentinels ah, iyagoo si masayr ah u difaacaya asturnaantooda.
Hase yeeshe, si kastaba ha noqotee, waxaan diiradda saareynaa dusha sare ee dhulka - iyo khasnadaha dabiiciga ah ee aan wali la sahamin ayaa na sugaya sidoo kale biyaha dushiisa.
Waa inaad si qoto dheer uga dhaadhacdo Mudanayaal iyo Marwooyin
Waqti ka hor waxaan la kulmay mid ka mid ah waqtiyada ugu quruxda badan internetka. degel uu qoray Neal Agarwal gaar ah oo loo yaqaan "The Deep Sea" (mahadsanid Neal - Waan ogahay inaad kuheli kartid qoraaladayda Boolish hubaal). Markaad hoos u rogto goobta, waxaan baari karnaa markaba sida nin qoto dheer uu ugu guuleystey inuu gaaro sahaminta adduunka hoostiisa ee meeraha Dunida. Waxaan sidoo kale aragnaa waxa xayawaan aan caadi aheyn ay ku nool yihiin qoto dheer, waxaanan kuu xaqiijinayaa - hadba sida ay u sii qoto dheer tahay, xayawaanka aadka u macaan ee aan la macaamilayno
Halkan kuma sharixi doono heer kasta oo qoto dheer oo biyo ah - waxaan kugula talinayaa, runtii kugula talinayaa, inaad adigu lafteeda baarto. Aan ku xuso uun inaan haysanno faun caadi ah oo u dhow dusha sare - waxaa jira kalluun loo yaqaan 'Atlantic Salmon', waxaa jira manatee, xitaa waxaa jira orso loo yaqaan 'quful polar' iyo kalluun kalluun ah (ama, haddii aad doorbideyso, "kalluunkii ahaa Nemo") .
Inyar oo sii dheer, waxaan aragnaa, tusaale ahaan, sharkyo kala duwan, illaa aan ka gaarno qoto dheer oo ah 332 mitir - tani waa meesha ugu fog ee uu nin ku qalabeysan yahay qulqulaya uu ku guuleystey inuu gaaro. Wax yar ka dib markii aan daloolnay 1000 mitir, waxaan aragnaa wakiil ka socda kalluunka kalluunka. Waxaad weydiin doontaa, "Waa maxay ciriirigan cidhiidhiga ah?" Hagaag, hadaad waligaa aragtay kalluun leh "laambad" (Qolyihii qurxin) dhabarka - taasi waa waxa ay tahay.
Dhanka kale, barta ugu hooseysa adduunka biyaha hoostooda waa Qoto-dheerda Loolanka, qayb ka mid ah Marian Trench oo qiyaastii 11 mitir ka hooseeya heerka badda. Oo xitaa nin baa halkaas gaadhay.
"Trieste" - sida layaabka leh ee bini-aadamnimadu u garaacday salka (qaybta dadweynaha).
Beer sahamin hoosta laga xariiqay
Maxaan wax uga qorayaa waxaas oo dhan? Sababta oo ah waxaan si qoto dheer u aaminsanahay in sida aan ugu fiirsanayno xiisaha la fahmi karo waxyaabaha soo socda ee NASA ama Elon Musk (kalgacal ay ugu yeeraan Elon Piżmo dadka isticmaala internetka ee reer Poland) marka laga hadlayo ku guuleysiga booska bannaanka, waa inaan si isku mid ah si taxaddar leh "u fiirino cagaheenna" markaan baarno moolka iyo badweynta. Ma aha oo keliya haraaga bakteeriyada suuragalka ah ama raadadka biyaha ee meerayaasha kale ee tirin kara.
Runtu waxay tahay inaan horey u haysanno - hubaal oo dhan - tiknoolajiyadda noo oggolaaneysa inaan si taxaddar leh u baarno meelaha kala duwan ee ka hooseeya xeebta qaaradaha. Si kastaba ha noqotee - ugu yaraan ra'yigeyga - tani maahan mudnaan weyn aadanaha. Waa wax laga xumaado - in kastoo laga yaabo inaan wali tufno ereyada noocaas ah.
Waxaan qiyaasayaa in tobanka sano ee soo socda, bini aadamnimada, aan horumarin doonno baaritaanno dheeri ah, aaladaha sayniska iyo qubayska taas oo noo oggolaan doonta inaan ku cabirno cabirrada iyo indha indheynta kala duwan ee biyaha.
Tani waxay na siin doontaa fursado aan caadi ahayn si aan u ballaarinno aqoonteenna meeraheenna, laga yaabee in aan hagaajino baaritaanka maangalka ah ee dhibaatooyinka la midka ah kuwa dhibay maskaxda cilmi-baarayaasha qadiimiga ah - qaabka dhammaan Atlanteans-ka iyo Lemuria kale, iyo sidoo kale "bannaan" wuxuush. Immisa wakiilo oo gebi ahaanba cusub oo flora iyo dugaag ayaan ku ogaan doonnaa sidan? Hal Neptune oo keliya ayaa og.
Tani waa waxa loogu yeero kalluunka xashiishka haddii aad u jiido dusha sare. Waxyaabaha la sheegi karo (aut. Gb89.2, CC0 1.0).
Kameradda ka bax, xashiishka ayaa dabbaalanaya
Isla mar ahaantaana, waxaan qiyaasayaa in muddo ka dib, sida saxda ah waxa ku dhici doona sahaminta hawada ay dhici doonto - buun buunin ku saabsan dalxiiska biyaha hoostiisa ayaa noqon doona - sida kiiska dalxiiska bannaan - oo si xoog leh loo calaamadeeyay. Mustaqbalka, horumarinta gawaarida biyaha hoostooda, waxay noqon doontaa madadaalo caadi ah.
Si kastaba ha noqotee, maanta maaha wax la yaab leh in noocyo kala duwan ay galaan safarada biyaha hoostooda, ama in kooxaha oo dhan, dabcan lagu xiro baqashada aaminka ah, si dhow ugu fiirsadaan sharkyada. Muxuu qof, fursad u helayaa, uga gaabsadaa inuu u safro dhowr kiiloomitir badda dhexdeeda si uu u arko dhammaan kalluunkan dhalaalaya iyo xayawaanada kale ee qalaad ee leh teendhooyinka dhaadheer iyo lifaaqyada qalooca.
Waxaan u arkaa dhibaato - halka saynisyahan dhab ah ay tahay wax muuqda oo aad muhiim u ah faragalinta sida ugu yar ee suurtogalka ah deegaanka uu baarayo, ma ahan dalxiis kasta oo quusin (ama dalxiis haba yaraadee) wuu awoodaa - nasiib daro - inuu dhaqaajiyo makowka oo aad ula dhaqanto dareen masuuliyadeed oo la mid ah.
Immisa jeer ayaan aragnaa qashin looga tagay dariiqyada iyo agagaaraha dhismooyinka taariikhiga ah? Ku dhowaad joogto ah. Dabcan, biyaha hoostooda way adagtahay in sanka gadaashiisa looga tago, in kastoo… Waxaan idin xasuusinayaa IN biyaha, oo aan ka qoomameynayo inaan idin xasuusiyo, waxaa jira ifafaalo ay ka mid yihiin Qashin-qubka Weyn ee Baasifigga.
Ha u qaadin algae guriga
Si kastaba ha noqotee, tani waa kalabar dhibaatada. Immisa dalxiisayaal ah ayaa ku faraxsan inay dhiirrigeliyaan - gebi ahaanba sharci darro - "xusuusiyeyaal" safaradii? Immisa ayaa jaray gabal ka mid ah Uluru Rock oo ku yaal Australia, qayb ka mid ah gidaarka Hadrian ama gidaarka Shiinaha? Qaar baa jiray.
Muxuu qof, gebi ahaanba ilaalin la'aan, iyadoo la kaashanayo gaarigiisa gaarka ah (ma diidi karno waxyaabahan oo kale sanadaha X) ma u qaadan karaan kalluun ama algae si ay ugu qalalaan xusuus ahaan? Wax kastoo ay ahayd fosilku, waxay kaga fiicnaan lahayd dabka.
Qodob kale oo aan u maleynayo in bini'aadamku ugu yaraan tixgelin doono waa hudheelada biyaha hoostooda ku jira ee qoto dheer. Hagaag, laga yaabee in dhan - in kabadan ama kayar joogto ah - magaalooyin, markan runti waa gooni. Riyooyinka ku saabsan ayaa durba ka muuqda sawirro hore oo lagu hayo heshiiska sheekooyinka sayniska iyo sidoo kale sheekooyinka iyo sheekooyinka ka imanaya cimilada la midka ah. Haddii cilmigu xoog yeesho, sheekooyinka ayaa gebi ahaanba baaba'aya.
Kaaga darane, haddii aan daadka deris ka noqonno magaaladan oo kale. Tani waxay ka sii xumaan doontaa masiibada mashiinka dharka lagu dhaqo.
Sawir qurux badan oo loogu talagalay xiisaha Kabtan Nemo oo muujinaya Atlantis. Ma arki doonnaa magaalooyin biyo hoosaad dhab ah? (domainka guud).
Ku socda raadadkii Cameron
Waxaan sawirayaa aragti masiibo badhkeed ah - arrimaha noocan oo kale ah, hase yeeshe, qofku waa inuu aad uga taxaddaraa. Sida aan uga walwalsanahay xaalada aagaga kaymaha, xeebaha nadiifka ah, ilaalinta noocyada "terrestrial" ee xoolaha, iyo in cosmos - lagu wasakheeyey qashin badan iyo in ka sii badan - ayaa nadiif noqon doona, sidaa darteed waxaan sidoo kale u baahanahay inaan ka fikirno macnaha guud ee sahaminta mustaqbalka (iyo weliba sidoo kale dhiig-miirashada…) qoto dheer ee meeraheenna.
Illaa iyo hadda (uguyaraan tani waa sidaan u arko), wax badani ma socdaan - tan iyo 1960 (!) Qeybta hoose ee Marian Trench oo saaran markabka "Trieste" Don Walsh iyo Jacques Piccard waxay sugayeen in ka badan 50 sano dhacdo warbaahinta labaad. Sannadkii 2012-kii, James Cameron wuxuu sameeyay hawl la mid ah - haa, agaasimihii shirkadda eg. "Terminator", "Titanic" iyo "Avatar" iyo ... bad-yaqaan.
Miyaanu dhakhso u dedejin doonnaa xawaaraha sahaminta godka (ka xumahay, waa inaan kaftankaas luqadeed ee liita ka dhigaa)? Waxaan rajeynayaa. Miyaan sidoo kale daryeeli doonaa faragelinta ugu yar ee suurtagalka ah ee wejiga hoostiisa ee meeraheenna quruxda badan? Waxaan rajeynayaa intaas intaas ka sii badan.
Dhanka kale, waxaan ku soo laabtay daawashada bogga qoto dheer.
Bul. Oh, waa maxay dinaar yar oo qosol badan.
Laakiin adigu ma wiciaysid! Waxaan galeynaa xilligii qoto-dheerida qotoda dheer
ai, qoto dheer, deeplearning, bulshada, farsamada, tiktok
Ka soo qaad in maalin uun aad shidato kombuyuutarkaaga isla markaana si lama filaan ah saaxiibbadaa oo dhan ay kuugu soo qulqulayaan adiga oo wata macluumaad ah inaad samaysay wax la yaab leh. Waxay arkeen fiidiyowga daqiiqad kahor halkaasoo aad ugu hanjabtay inaad garaacayso madaxweynaha. Ama meeshii aad ku been abuurtay Pope ...
Immisa ayey tahay inaad qiimeyso ... Kawaran haddii internetka uun la waayo?
shil, internet, farsamada
Waqti ka hor, macluumaad adduunka ku baahsan - Ruushka ayaa kala tagaya, Ruushku wuu ka goayaa internetka caalamiga ah! In kasta oo lagu dhawaaqay buun-buunin, waxay igu dhiirrigelisay inaan ka fikiro - iyo haddii waddan kasta ...
Na Diagon Alley! Teleportation data iyo Kumbuyuutar intarneedka ah
3 Janaayo 2021
internet, kontom, farsamada, teleportation
Waxaan jeclahay daawashada. Waxaan jeclahay inaan u safro meelaha u dhow iyo kuwa fog oo aan ku dul lugeeyo ilaa ay weyyaashaydu dab ka kacayaan si qasab looga dhigo. Taa baddalkeeda, waxaan jeclahay dhammaan ceebta la xiriirta ...
Qarnigii 120aad ee Skype, ama sida nolosha caqliga leh loo qiyaasay XNUMX sano ka hor
mustaqbalka, Retro, retrofuturism, guri caqli badan
Haddii aan lahaan lahaa awoodda sirta ah ee aan ku saadaalin karo mustaqbalka sida kuwa faaliyeyaasha ah ee Maciej, waxaan ku iibsan lahaa bitcoins qiimaha kubbadda caagga muddo dheer ka hor, ama waxaan ku ridi lahaa lacagtayda oo dhan xaqiiqda ah in Marcin Najman uu bilaabi doono laadadka ka soo horjeedka inta lagu gudajiro khilaafka ...
Sida wax loo xado macnaheedu waa malaayiin, haddii aad wax khiyaameyso, waxaa loola jeedaa tartamo. Daaweynta farsamada ee isboortiga
dawooyinkii, cayaaraha, qalabka basaasnimada, farsamada
Faras wata saf dad ah oo aan waligood ciyaarin kumbuyuutar xitaa 5 daqiiqo noloshooda. Iyo saf faras ah oo loogu talagalay kuwa aan waligood khibrad uheynin ciyaaraha, tusaale ahaan ...
Teknolojiyada ku jirta koronavirus - la kulan Drumset Academy
Dadku waa cajiib oo waxaan marlabaad si wanaagsan ula yaabay fikradaha hal-abuurka ah. Ganacsiyada yar yar uma sahlana xaalada taagan, laakiin mararka qaar qof baa adeegsada tikniyoolajiyadda oo la yimaado xal wanaagsan! Oo waxaan nahay ...
La kulan NAUCRATES! Shandad caqli badan oo leh astaamo badan oo weyn iyo mid runtii ah mid gaar ah
shandadaha caqliga leh, qasbay, safarka
Shandad kale oo caqli badan oo leh ikhtiyaarka GPS-ka ayaa ka muuqday INDIEGOGO portal, laakiin kan waxaa lagu gartaa hal hanti aan caadi ahayn. Tanna waa sababta aad u fuuli karto! Sida saxda ah, marka lagu daro howlo fara badan oo aan dhowaan soo sharixi doonno, ...